Imizekelo ye-6 yeZixhobo zokuThengisa eziSebenzisa i-Artificial Intelligence (AI) | Martech Zone
Kukubhadla okungeyonyani (AI) ngokukhawuleza iba yenye yezona buzzwords ezidumileyo zokuthengisa. Kwaye ngesizathu esilungileyo-i-AI ingasinceda ukuba sizenze ngokuzenzekelayo imisebenzi ephindaphindayo, ukwenza umzamo wokuthengisa, kwaye senze izigqibo ezingcono, ngokukhawuleza!
Xa kuziwa ekwandiseni ukubonakala kophawu, i-AI inokusetyenziselwa inani lemisebenzi eyahlukeneyo, kubandakanya ukuthengisa okuphembelelayo, ukudala umxholo, ulawulo lwemidiya yoluntu, isizukulwana esikhokelayo, i-SEO, ukuhlelwa kwemifanekiso, kunye nokunye.
Apha ngezantsi, siza kujonga ezinye zezona zixhobo zibalaseleyo ze-AI kubathengisi abanokuphucula ukuguqulwa kwephulo, ukwandisa ukusebenza kakuhle, kunye nokwandisa ukubonakala kwewebhusayithi:
I-IMAI liqonga lokuthengisa eliqhutywa yi-AI elisivumela ukuba sifumane abaphembeleli abafanelekileyo kwi-brand, silandelele ukusebenza kwabo, kwaye silinganise i-ROI. Isithako esiphambili kwi-IMAI sisixhobo sayo esinamandla sokufumanisa i-AI ekwaziyo ukukhangela kunye nokuqokelela idatha kwezona ziphembeleli ze-niche kwi-Instagram, Youtube, naseTikTok.
I-AI ibonelela ngamathuba okuba iibrendi zifumane kwaye zijolise uninzi lwabaphembeleli be-niche kwishishini labo. Ubuchule be-AI bokufumana ngokukhawuleza abaphembeleli buvumela i-IMAI ukuba ibenowona vimba weenkcukacha owomeleleyo.
U-Amra Beganovich, i-CEO ye-arhente yokuthengisa idijithali UAmra kunye noElma
Umzekelo, umenzi wemoto ofuna ukufumanisa abantu abaphembelela iimoto abanomdla kuphela kwiimoto zemidlalo unokukwazi ukufumana i-niche enokuba ngunozakuzaku we-brand esebenzisa i-AI ngaphandle kokukhangela ngesandla kwimidiya yoluntu. Obu buchule bokungena kwitalente ehambelana kakhulu nendawo ekujoliswe kuyo yophawu kunceda ukonyusa uguqulo lwabaphembeleli kunye nokwandisa iphulo le-ROI.
Fumana iDemo ye-IMAI
I-AI-Iqhutywa Ukudalwa kokuqukethwe
Ibhokisi yebhokisi ngumncedisi wokubhala we-AI onokunceda ukudala umxholo ongcono, ngokukhawuleza. Isebenzisa inkqubo yolwimi lwendalo (NLP) ukuhlalutya isicatshulwa kunye nokunika iingcebiso malunga nendlela yokuphucula isiqwenga sokubhala. Umzekelo, uQuillbot unokucebisa amanye amagama okanye amabinzana, acebise izithethantonye, ​​okanye anike iingcebiso zegrama.
Ukusebenzisa i-AI ukuncedisa ekudalweni komxholo kusivumela ukuba siphucule ukuthengiswa kunye nokwenza ubuntu kwiwebhusayithi yethu kunye nomxholo wemidiya yoluntu. Umzekelo, i-AI isivumela ukuba sonyuse isibheno sephepha lokufika okanye iposti yebhlog ngokwenza iingcebiso kumagama okanye iintetho ezinokuvakala kakhulu njenge-monotone kwaye ziyadika.
Eliza Medley, umphathi womxholo we Hostinger
I-Quillbot inenani leempawu ezinokunceda kubandakanya isikhokelo sesitayile, umkhangeli wokukopa, kunye namanqaku okufunda. I-AI inokunika isikhokelo malunga nokuphinda kubhalwe amanqaku okanye izivakalisi kwaye ibenze babe nomdla ngakumbi.
I-AI-Iqhutywa Ulawulo lwezeNtlalo
Hlangana noEdgar sisixhobo solawulo semidiya yoluntu esine-AI esiza ngokuzenzekelayo ukuthunyelwa kwemidiya yoluntu. Ivumela ukuba senze iibhakethi zomxholo ngokusekelwe kwizihloko, amagama angundoqo, okanye i-hashtag. Isoftware ke igcwalisa ezo bhakethi ngomxholo ovela kwimithombo eyahlukeneyo, kubandakanya i-RSS feeds, iiblogs, kunye namanqaku.
Ukuhlala phezulu kwiimpawu kunika iimveliso ithuba lokudala umxholo onentsingiselo kubaphulaphuli babo. Ngokusebenzisa i-AI ukuqokelela eyona datha ifanelekileyo kwishishini, sinokuphucula isicwangciso sethu seendaba zentlalo ukuze sinxibelelane ngcono nabaphulaphuli bethu.
UReynald Fasciaux, i-COO ye Isifundo
I-MeetEdgar iyasivumela ukuba sicwangcise izithuba zethu kwangethuba, kwaye iqinisekisa ukuba umxholo wethu uthunyelwa ngexesha elifanelekileyo lothethathethwano. Umzekelo, ukuba sineposti yebhlog esifuna ukwabelana ngayo kumajelo eendaba ezentlalo, i-MeetEdgar iya kusivumela ukuba siqale siyenzele ezona ndaba zinomdla kunye nezamva nje zeshishini, emva koko iyakwabelana ngesithuba ngexesha elithile ngokusekwe kumsebenzi wabaphulaphuli. iipateni.
Zama u-Edgar Mahala
I-AI-Iqhutywa Generation Generation
I-LeadiQ sisixhobo esikhokelayo se-AI esisinceda sifumane kwaye sifanelekele izikhokelo, ngokukhawuleza.
LeadiQ isebenzisa inani lemithombo yedatha eyahlukeneyo ukufumana izikhokelo, kubandakanya imidiya yoluntu, iibhodi zemisebenzi, kunye nezalathisi zoshishino. Nje ukuba i-LeadIQ ifumane ukukhokela, iya kusebenzisa i-NLP ukuhlalutya ubukho be-intanethi ye-intanethi kunye namanqaku okukhokela ngokusekelwe ekubeni nomdla kwimveliso okanye inkonzo yethu.
Ukusebenzisa i-AI ukwenza ngokuzenzekelayo iinzame zophuhliso lweshishini kunika ithuba lokuqinisa ngakumbi umgangatho wobudlelwane phakathi kweempawu kunye nabathengi. Inika ithuba lokugxila ngakumbi kwinkalo yomntu yobo budlelwane ngokonga ixesha kwincwadana kwaye ngamanye amaxesha kunzima kakhulu inkqubo yokufumanisa umxumi.
UBerina Karic, umphathi wentengiso kwi I-Arhente yeNtengiso yabaPhembeleli abaPhezulu
I-LeadiQ ingasetyenziselwa ukuseta amaphulo okukhulisa ukhokelo oluzenzekelayo, ukuze siqhubeke nokuzibandakanya nezikhokelo zethu nokuba azikakulungeli ukuthenga kwangoko. Umzekelo, sinokuseta isoftwe ukuba sithumele uthotho lwee-imeyile ezikhokelayo ekuhambeni kwexesha, okanye nokubanika umnxeba ukuba abakhange baphendule kwii-imeyile zakho.
Qala ngeLeadiQ Mahala
I-AI-Driven Search Engine Optimization
IMoz Pro luPhuculo lweNjini yoPhendlo olunamandla e-AI (seo) isixhobo esinceda ukuphucula iiwebhusayithi ezibekwe kwiinjini zokukhangela.
I-Moz Pro isebenzisa inani lemithombo yedatha eyahlukeneyo ukuhlalutya iwebhusayithi kwaye inike iingcebiso malunga nendlela yokuphucula i-SEO yohlobo.
I-Moz isivumela ukuba singene ngaphakathi kwimiqathango yobunzima obuphantsi, kwaye sifumane amagama angundoqo we-niche anokuthi angahoywa ngabakhuphisana nabo. Oku kunika ithuba lokuphuhlisa isicwangciso sentengiso yomxholo esekelwe kwindlela yokuhlalutya kunokuba uqikelele, okt ukudala izithuba okanye amaphepha okumisa athi ngethiyori avakale kakuhle kodwa angafumani itrafikhi.
UChris Zacher, iQhinga leNtengiso lokuThengisa kwi Ukuhluma
I-Moz Pro inceda ekufumaneni amagama angundoqo asebenzayo ekujoliswe kuwo, ukunika iingcebiso zokuphucula isihloko sewebhusayithi kunye ne-meta tags, kunye nokulandelela izikhundla ngexesha. Ineqela lezinye iimpawu ezinokunceda ukuphucula i-SEO ye-brand, kubandakanywa nesixhobo sokwakha ikhonkco, isixhobo sophicotho lwendawo, kunye nesixhobo sokuhlalutya sokukhuphisana.
Qala ulingo lwakho lweMoz Pro
I-AI-Iqhutywa UkuPapashwa kweZithombe
I-Luminar AI ngumhleli weefoto osebenzisa i-AI ukwenza lula ukuhlelwa kweefoto kwaye iyenze ifikeleleke kubaqalayo okanye abafoti abajonge ukuyihlela ngokukhawuleza kwisikali. Inika abasebenzisi amandla okwenza imifanekiso efana ne-Photoshop ngokucofa nje okumbalwa ngokufunda umfanekiso ngokuzenzekelayo kunye nokuchonga imiba eyahlukeneyo yawo, kubandakanya imvelaphi, iimpawu zobuso, iimpahla, kunye nokunye.
I-Luminar inika ithuba kwiingcali ezingezizo eze-Photoshop ukwenza iziqwenga ezikhethekileyo zomxholo ekunokwenzeka ukuba zifumane ukubandakanyeka kunye nokuguqulwa. Ngokucofa nje okumbalwa, sinokuhlengahlengisa imvelaphi yomfanekiso, ulusu olugudileyo, amehlo aqaqambe, kwaye sigqibezele eminye imisebenzi ngokwesiko ebinokudinga iiyure zokuhlela.
llija Sekulov, Intengiso yeDijithali & SEO kwi Umphathi wemeyile
Jonga iLuminar AI
Ikamva le-AI kwiNtengiso
Izixhobo ze-AI zinokuphucula kakhulu iinzame zokuthengisa ngokuvumela abathengisi ukuba baphucule ukusebenza kakuhle, ukwandisa ukubonakala, ukunyusa ukuguqulwa, kunye nokunye! Bakhawuleza babe yinxalenye yemigudu yethu yentengiso yemihla ngemihla kwaye banokukhula babe yintaphane yemisebenzi esiyigqibayo xa sikhulisa uphawu. Ngokusebenzisa i-AI ukukhulisa amaphulo ethu, sinokwenza imisebenzi ngokuzenzekelayo, sizenzele ukuthengisa, kwaye ekugqibeleni senze izigqibo ezingcono, ngokukhawuleza!
tags: aiIzixhobo ze-aiAmra noElmakukubhadla okungeyonyaniizixhobo zobukrelekrele bokwenziwaberina karicuchris zacherukudalwa komxholo aiUkuThengiswa kweMpahlaukuthengiswa komxholo aiedgarukuhlela aiimayiukuthengisa okunempembelelointengiso enempembelelo aiukuhlumaleadiqlija Sekulovukukhanya kwe-aiumthengisi weposiukuhlangabezanamoz pronlpifoto ainokuhlela photoPhotoshopi-quillbotUReynald Fasciauxusetyenziso lwe-injini yokukhangela aioko aiImidiya yokuncokolaimidiya yoluntu aiIsifundoiarhente yokuthengisa enempembelelo